The 2nd Myanmar International Education and Career Fair 2016 ﻿
The 2nd Myanmar International Education and Career Fair 2016
Tags: career fair education fair job fair
ကျွန်ုပ်တို့ JobsInYangon.com သည် ဒုတိယအကြိမ်မြောက်အဖြစ် Dagon Exhibition မှ ပြုလုပ်ကျင်းပမည့် Education and Career Fair 2016 တွင် Exclusive Media Partnership အဖြစ်ပါဝင်သွားမည်ဖြစ်ပြီး အလုပ်အကိုင်များကို လည်း လူကြီးမင်းများလျှောက်ထားနိုင်အောင် တင်ဆက်မည်ဖြစ်သကဲ့သို့ Online Assessment ကို လည်း အခမဲ့ဝန်ဆောင်မှုပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသဖြင့် လာရာက်ကြပါရန် လေးစားစွာဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်။
Exhibitor များ မည်သည့်အတွက် ပါဝင်သင့်သနည်း။
လူကြီး၏ Brand ကို promote ပြုလုပ်နိုင်ခြင်း
အရည်အသွေးပြည့်ဝသော အလုပ်ရှာဖွေသူများကို ရရှိနိုင်ခြင်း
Online publicity campaigns (e-banners, flash, event listing) စသည်တို့တွင် ပါဝင်နိုင်ခြင်း
Emailer campaigns တွင် ပါဝင်နိုင်ခြင်း
Facebook, Twitter and other social and community media တို့တွင် ပါဝင်နိုင်ခြင်း
Radio Advertisement တို့တွင် ပါဝင်နိုင်ခြင်း
Newspaper advertisementsများတွင် ပါဝင်နိုင်ခြင်း
အချိန်ကို ငွေကို ချွှေတာနိုင်ခြင်း
နိင်ငံခြားနှင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပညာသင်ယူလိုသော ကျောင်းသူကျေင်းသားများကို ရရှိနိုင်ခြင်း
စိတ်ပါဝင်စား၍ Exhibitors အဖြစ်ပါဝင်လိုပါက
ကိုမြင့်ဇော် ( Assistant Marketing Manager )
Phone : 09420107472 သို့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
အလုပ်ရှာဖွေသူများနှင့် ကျောင်းသူ/သားများ မည်သည့်အတွက်ကြောင့် ဤပြပွဲကို တက်ရောက်သင့်သနည်း။
CV တစ်စောင်တည်းဖြင့် ကုမ္ပဏီကြီးများမှ အလုပ်များကို လျှေက်ထားနိုင်ခြင်း
လူကြီးမင်းတို့၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို အကဲဖြတ်ပေးသည့် Online Assessment ကို အခမဲ့ဖြေဆိုနိုင်ခြင်း
Internet Business နှင့် Recruitment ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံများကို အခမဲ့ လေ့လာသင်ယူနိုင်သည့် Internship Program များကို ရယူနိုင်ခြင်း
နိုင်ငံခြားနှင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပညာသင်ကြားလိုသူများ တစ်နေရာတည်းတွင် မိမိပညာရေးအတွက် လေ့လာနိုင်သည့် သတင်အချက်အလက်များကို သိရှိနိုင်ခြင်း
ထိုအခွင့်အရေးများကို ရယူလိုပါက ကျွန်ုပ်တို့၏ The 2nd Myanmar Education and Career Fair 2016" ကို လာရောက်ရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။
လူကြီးမင်းတို့၏ www.jobsinyangon.com အဖွဲ့သားများ
We are very pleased to inform you that we are exclusive partner as career website and online assessment to the candidates and support the 2nd Myanmar International Education & Career Fair 2016.
The 2nd Myanmar International Education & Career Fair 2016 is the part of the largest annual gathering of the year in recruitment and education in Myanmar. So, please try to be there for your opportunities for your future.
Welcome to all Exhibitors and candidates.
For Exhibitors: Why you should be Exhibitor?
1. Promote your Brand
2. Access to qualified candidates
3. Online publicity campaigns (e-banners, flash, event listing)
4. Emailer campaigns
5. Facebook, Twitter and other social and community media
7. Newspaper advertisements
9. Connect with Fresh Graduates and students who are willing to study in abroad and here.
For Booth Inquire , please kindly contact as below
Mr Myint Zaw
Phone : 09420107472
For Candidates and Students-Why you should attend to this fair?
1. Can apply for the jobs from Top Companies in Myanmar in one place with one CV form.
2. Can do Online Assessment for free what you can know your competency rate.
3. Learn about job and Internship program of Internet Business
4. Can Explore variety education for your study in abroad and here.
See you there on June 24-June-2016-26.June.2016
If you need any further information, please contact us anytime.